Apple inogadziridza macOS Big Sur kugadzirisa USB-C nhamo
Apple yakagadziridza macOS Big Sur kugadzirisa matambudziko neisina-anoenderana USB-C hubs. USB-C chave chinhu chinoshamisa cheMac uye Windows MaPC akafanana, ane kugona kubatanidza data, kuratidza uye simba kuburikidza netambo imwe chete. Nekudaro, neyakajairwa yakadaro panogara paine yakaipa peripherals uye isingaenderane USB-C hubs nemimwe michina yakonzera matambudziko. Apple Silicon iri… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apple inogadziridza macOS Big Sur kugadzirisa USB-C nhamo
Edraw Max ndiye Visio Alternative yemacOS
Yese yakanakisa mharidzo uye zvinyorwa zvine inonakidza uye inonakidza ruzivo rwekuona kuenda narwo - chikamu chakakosha chekugadzirisa vanhu ungave uri mubhizinesi rekugadzirisa kana muhupenyu hwako pachako. Izvi zvinogona kureva dhayagiramu, mamepu epfungwa, machati kana chero nhamba yedzimwe sarudzo, asi hapana akawanda maapplication ari pamusika anonangana nezvinoonekwa se… [Verenga zvakawanda ...] nezve Edraw Max ndiyo Visio Imwe nzira yemacOS